ရက်ကိုးဆယ်အတွင်း လာဘ်ရွှင်စေသောနည်း – သုတရသ
လုပ်အားကြောင့်ငွေဝင်တာရယ်၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ပုံမှန်ဝင်ငွေကောင်းနေတာရယ်၊အရောင်းအဝယ်ကိစ္စများ အောင်မြင်လို့ ငွေဝင်တာတွေကို လူတွေက သိပ်ပြီး မရောင့်ရဲ မတင်းတိမ်နိုင်ကြဘူး။ များသောအားဖြင့် ကံတရားကြောင့် ငွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် ဝင်တာကိုလည်း လိုလားတောင့်တာကြတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အခွင့်အရေးကောင်းကြုံလို့ ဖြစ်စေ၊ ထီပေါက်ချဲပေါက် ကောက်ရလို့ဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ်
လုံးဝပြန်မရနိုင် တော့ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ငွေတွေ ပြန်ဝင်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ အဲဒီလို ဝင်လာတဲ့ငွေကြေးတွေကို ကျွန်တ်ာအပါအဝင် လူသားတိုင်းကိ မျှော်လင့်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဗေဒင်ဟောခန်းကို ရောက်လာတဲ့ လူတိုင်းက မေးတတ်ကြတယ်။ ငွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် ဝင်ကိန်းရှိလားတို့၊ ထီပေါက်ကိန်း ချဲပေါက်ကိန်း မြင်လားတို့ပေါ့။ နောက် ဘယ်လို ယတြာတွေအဆောင်တွေလုပ်ရင်ေ
ငွကြေးလာဘ်လာဘတွေ ပွင့်လန်းနိုင်င်သလဲ စသည်ဖြင့် မေးတတ်ကြတယ်။ လုပ်ရမှာကတော့ လွယ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဇယားလေးတစ်ခု ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိနေ့သားအလိုက် တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တွေ နေ့တွေတော့ တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အရမ်းလွယ်လို့ အဆင်ပြေပါ့မလားလို့တော့ မတွေးစေချင်ပါဘူး။ လုပ်ကြည့်ပါ။ ရှေ့ဘုန်းရှေ့ကံအရ ဝင်ငွေ
နည်းခြင်း၊ ဝင်ငွေများခြင်းသာ ကွာခြားတာပါ။ အောင်မြင်တဲ့ လူတွေ များပါတယ်။ ရက်ပေါင်းကိုးဆယ်အတွင်း ထူးခြားပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိတဲ့လူတွေကလည်း အဲဒီယတြာ ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် ပိုပြီးတော့ ဝင်ငွေတိုးပွာခြင်းနှင့် အဆင်ပြေစေပါတယ်။ လုပ်ရမှာက မိမိနေ့အလိုက် ဆန်သုံးဆုပ်ကြဲပက်ကာ ကြက်ငှက် သတ္တဝတို့အား ကျွေးမွေးဆုတောင်းပါ။ ဥပမာ တနင်္လာသားဖြစ်သော ကျွန်တော်က
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံက် (၆း၄၅) မိနစ်မှာ ရေမိုးချိုးကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး မြေပြောင်ပြောင်မှာ အနောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူပြီး ဆန်သုံးဆုပ်ကြဲပက်ကာ ကြက်တို့ ငှက်တို့ အစရှိသော သတ္တဝါများကို ကျွေးမွေးရင်း ဆုတောင်းရမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် လုပ်နေကြပေါ့။ အဆင်ပြေမှန်း ကောင်းကောင်း သိနေပြီလေ…. မိတ်ဆွေတို့လည်း လုပ်ကြည့်ပါလား။
လုပျအားကွောငျ့ငှဝေငျတာရယျ၊ ကိုယျ့လုပျငနျးက ပုံမှနျဝငျငှကေောငျးနတောရယျ၊အရောငျးအဝယျကိစ်စမြား အောငျမွငျလို့ ငှဝေငျတာတှကေို လူတှကေ သိပျပွီး မရောငျ့ရဲ မတငျးတိမျနိုငျကွဘူး။ မြားသောအားဖွငျ့ ကံတရားကွောငျ့ ငှအေစုလိုကျအပွုံလိုကျ ဝငျတာကိုလညျး လိုလားတောငျ့တာကွတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ အခှငျ့အရေးကောငျးကွုံလို့ ဖွဈစေ၊ ထီပေါကျခြဲပေါကျ ကောကျရလို့ဖွဈစေ
ဒါမှမဟုတျ လုံးဝပွနျမရနိုငျ တော့ဘူးလို့ ထငျထားတဲ့ငှတှေေ ပွနျဝငျလာခွငျးကွောငျ့ဖွဈစေ အဲဒီလို ဝငျလာတဲ့ငှကွေေးတှကေို ကြှနျတျာအပါအဝငျ လူသားတိုငျးကိ မြှျောလငျ့ကွတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ ဗဒေငျဟောခနျးကို ရောကျလာတဲ့ လူတိုငျးက မေးတတျကွတယျ။ ငှအေစုလိုကျအပွုံလိုကျ ဝငျကိနျးရှိလားတို့၊ ထီပေါကျကိနျး ခြဲပေါကျကိနျး မွငျလားတို့ပေါ့။ နောကျ ဘယျလို ယတွာတှအေဆောငျတှလေုပျရငျ
ငှကွေေးလာဘျလာဘတှေ ပှငျ့လနျးနိုငျငျသလဲ စသညျဖွငျ့ မေးတတျကွတယျ။ လုပျရမှာကတော့ လှယျပါတယျ။ အောကျမှာ ဇယားလေးတဈခု ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ မိမိနသေ့ားအလိုကျ တဈပတျလြှငျတဈကွိမျ ဆောငျရှကျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အခြိနျတှေ နတှေ့တေော့ တိတိကကြ လိုကျနာဆောငျရှကျဖို့ လိုပါတယျ။ အရမျးလှယျလို့ အဆငျပွပေါ့မလားလို့တော့ မတှေးစခေငျြပါဘူး။ လုပျကွညျ့ပါ။
ရှဘေု့နျးရှကေံ့အရ ဝငျငှနေညျးခွငျး၊ ဝငျငှမြေားခွငျးသာ ကှာခွားတာပါ။ အောငျမွငျတဲ့ လူတှေ မြားပါတယျ။ ရကျပေါငျးကိုးဆယျအတှငျး ထူးခွားပါတယျ။ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးရှိတဲ့လူတှကေလညျး အဲဒီယတွာ ကိုဆောငျရှကျတဲ့အတှကျ ပိုပွီးတော့ ဝငျငှတေိုးပှာခွငျးနှငျ့ အဆငျပွစေပေါတယျ။ လုပျရမှာက မိမိနအေ့လိုကျ ဆနျသုံးဆုပျကွဲပကျကာ ကွကျငှကျ သတ်တဝတို့အား ကြှေးမှေးဆုတောငျးပါ။
ဥပမာ တနင်ျလာသားဖွဈသော ကြှနျတျောက ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ နံကျ (၆း၄၅) မိနဈမှာ ရမေိုးခြိုးကိုယျလကျသနျ့စငျပွီး မွပွေောငျပွောငျမှာ အနောကျအရပျကို မကျြနှာမူပွီး ဆနျသုံးဆုပျကွဲပကျကာ ကွကျတို့ ငှကျတို့ အစရှိသော သတ်တဝါမြားကို ကြှေးမှေးရငျး ဆုတောငျးရမှာပါ။ ကြှနျတျောကတော့ တဈပါတျတဈကွိမျ လုပျနကွေပေါ့။ အဆငျပွမှေနျး ကောငျးကောငျး သိနပွေီလေ…. မိတျဆှတေို့လညျး လုပျကွညျ့ပါလား။